China Vertical Slurry Pump ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Depump Technology
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဒေါင်လိုက် Slurry Pump
MSP ၏ဒေါင်လိုက် slurry pump သည်အစိတ်အပိုင်းများကို super wear -proof chromium သံမဏိသတ္တုစပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်တောက်ပသော၊ ၎င်းကိုသတ္တု၊ သတ္ထုတူးဖော်ခြင်း၊ ကျောက်မီးသွေး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ စုပ်စက်၏ ဦး ခေါင်းကိုစက်သီးအမျိုးအစားအဖြစ်ထားနိုင်သည်။ အဆိုပါစုပ်စက်အရည်အောက်မှာကြာရှည်နိုင်ပါသည်။
ဒေါင်လိုက် Slurry သတ္တုတွင်း pump
MSP စီးရီးဒေါင်လိုက် slurry စုပ်စက်
အသုံးပြုခြင်းအကွာအဝေး - ဒေါင်လိုက် slurry သတ္တုတူးဖော်ရေးစက်ကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ သတ္တု၊ သတ္တုတွင်း၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ဓာတုနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုအစိုင်အခဲအမှုန်များပါ ၀ င်သောပွန်းစားသောအပင်များကိုသယ်ယူရန်အဓိကအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ရေကန်တစ်ခုသို့မဟုတ်တွင်းထဲသို့နက်ရှိုင်းစွာ ၀ င်နိုင်သည်။
ဒေါင်လိုက်အကြီးစား Duty Slurry Pump
ဒေါင်လိုက်အကြီးစားဒြပ်ထုပ် Pumpps Slurry Pump သဲနှင့်ကျောက်စရစ် Pump ဒေါင်လိုက် Sump Slurry Pump သတ္တုတွင်းထုတ်ယူခြင်းဒေါင်လိုက် Sump ကိုအသုံးပြုသည်
စက်မှုရေမြုပ် Slurry Pump
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ရေမြုပ်နေသော slurry ပန့်သည် အဆင့်တစ်၊ စုပ်သပ်သပ်ရပ်သော၊ centrifugal နှင့် ဒေါင်လိုက် slurry ပန့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Depump's ၏ထိပ်တန်းထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ သတ္တုဗေဒ၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ဓာတုဗေဒနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အစိုင်အခဲအမှုန်များပါဝင်သော သံချေးတက်ခြင်းကို ကုသရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် သင့်လျော်ပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ပြီး စွမ်းအင်ချွေတာသည့် မျိုးဆက်သစ်၊ တစ်ခုတည်းသောစုပ်ယူမှု၊ centrifugal slurry pump ၏ မျိုးဆက်သစ်။
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော ဒေါင်လိုက် Slurry Pump ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောအနိမ့်ဈေးနှင့်စျေးပေါသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Depump Technology သည်တရုတ်ပြည်၏ကျော်ကြားသော ဒေါင်လိုက် Slurry Pump ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များရှိပြီးအမြောက်အများထုပ်ပိုးပါသည်။ ကျွန်ုပ်မှာယူမှုကိုယခုမှာယူလျှင်၊ သင်၌၎င်းမှာရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်! လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းစာရင်းသာမကဈေးနှုန်းများလည်းပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ ငါလက်ကားရောင်းချင်ရင်မင်းငါ့ကိုဘယ်စျေးနှုန်းပေးမှာလဲ? သင်၏လက်ကားအရေအတွက်များလွန်းပါကစက်ရုံစျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်အရောင်းရဆုံး၊ အဆင့်မြင့်၊ လျှော့စျေးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန်သင့်ကိုကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှလျှော့စျေးထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းမျှော်လင့်, သင်ပိုမိုသိလိုလျှင်, သင်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်, ငါတို့အချိန်မီသင်ပြန်ကြားမည်!